Cerpen singkat bahasa Shona | Alak-alakcumantaka
Contoh pidato tentang kesehatan dalam bahasa Maori...
Lirik lagu NOAH Separuh aku dalam bahasa Portugis
Home Uncategories Cerpen singkat bahasa Shona
tukang ngabala 06.12 Edit
Pazuva kuva chaiyo muna muBandung, paiva vaviri mapatya vasikana ainzi July uye Sofi. Asi Sofi kuberekwa kukwana, iye akaremara kumeso apo July anoberekwa vakakwana. Ivo akakura zvikuru, kusvikira rimwe zuva muna July uye Sofi pataikura, July uye Sofi akasiya vabereki vake kana akadonhera zera okuyaruka.
Sezvo aiva July akatanga kushanda nesimba kuti atsigire hanzvadzi yake Sophie uyo akaberekwa remara kumeso, iye wantid anogona kuona nyika yakanaka kunze uko asi maiwe, Sofi vanoziva kuti ndiye akaremara, hakusi sezvo July anoberekwa vakakwana.
Sofi muchivande akada murume ainzi Tristan, asi Sophie haana chivindi chokuudza yaJuly. Kusvikira zuva rimwe vanoziva kuti zviri zvechokwadi Tristan Sofi akafanana July. Sofi mwoyo akati "Handina kukodzera kudiwa nomunhu akakwana sezvo Tristan, uko zvichida aigona rudo remara musikana akafanana neni".
Kusvikira umwe apo Sofi akasarudza kuzviuraya mukunyadziswa pamwe chiso kuremara, apo July aiva pahofisi yebazi kumba uye kuudza - Short Story Short, dzezvaiedzwa Vanasikana Vaviri Twins - Sofi kuti aifanira vawane mari anodawo kunodyira Sofi, July akati "Haisva Sofi nazvo zvino uchishanda chake uye kwete kunyara kubuda mumba ".
July akaenda kumba pakarepo, aisagona kumirira kutaurira Sofi. Apo July akasvika mufurati July achidana Sofi, asi pakanga pasina mhinduro kubva Sofi, July kutsvaka kekamar Sofi asi kwete. July akaonawo yokugezera Sofi, uye July akashamiswa kuona Sofi ayakanga akafukidza ropa.
July akanga nokupopota rokuchema, akambundira Sofi akati "Seiko muchiita Sofi ichi, ndine mari yako uchishandisa mari, asi nei muchiita izvi uye mundisiye".
Officers furati inzwai vachishevedzera uye zvakabva zvati July. Officers furati akashamisika kuona mukadzi maoko July, haana kuziva kuti July vaiva mapatya, nekuti akanga kumboona kuti kuwedzera mufurati July maiva mukadzi July.
3 Makore gare gare muna July uye Tristan akaroora, kutanga vairarama vachifara. Pane imwe nguva muna July uye Tristan akaenda famba uye netsaona kundosangana anoongorora nyeredzi uye Permal naro kufanotaura nezveramangwana yaJuly uye Tristan kubva kadhi.
Forecasters vakati "Upenyu iwe anovhiringidzika nechinhu chipi chinobva kare kutora upenyu mumwe wenyu". regai asi havana kutenda pakarepo uprofita, kunyanya Tristan. Asi mukusaziva July pakupedzisira kukanganiswa uprofita uhwu, uye pakarepo akarangarira mapatya.
Sezvo July uye Tristan panguva Teller, July kuzvifarira anenge mazuva ose, iye anowana kurota zvinotyisa, muviri mavanga pasina chikonzero uye nemimvuri pamusoro Sofi zvichiita zvachose mupfungwa, uye kubva ikoko muna July kuziva kuti Tristan uye upenyu hwake huri munjodzi. July akakokwa kusangana Makorokoto mutauri wemashoko wacho Tristan kare, zvino muna July akaudza tsvene "Sei kumisa uprofita zvinoitika", akapindura n'anga "Zvaifungidzirwa haagoni kumiswa angambosvika".
Forecasters vakakurumidza kure, Zvinotyisa vari kuramba kutyisidzirwa July uye Tristan. Kusvikira umwe apo Sofi akauya July uye akaratidza chiso chake, juli aitya uye kuridza mhere. Kunzwa bereriak July, Tristan Tristan akashanyirwa muna July uye vaiva akashamisika pana Sofi mupatya wake muna July. Sofi atendeuka uye zvakabva zvati Tristan, Sofi akati, "Imi Wakandiitirei zvakadai, zvino ndichaita hwogumisa hwako".
Sofi haana aiva nguva kupindura Tristan Tristan akanga pakarepo zvikanyauka pamusoro furati, uye July vachipopota zvikuru kwazvo akati kuna Sofi "Sofi Seiko muchiita izvi, chii Tristan chakaipa here?" Sophie akapindura, "Ari kare akandiita sezvinoita ichi".
July akati: "Chii chakaitwa Tristan, uye nei vakaita wandisiya Sofi Chokwadi panguva iyoyo ndinoda kukuudzai ndine mari uchishandisa mari chiso chako, asi nei iwe kuzviita ndokundisiya Sofi.
Ndiri kwazvo kwazvo iwe ". Sofi akachema akapindura "Nokuti ndinoda Tristan asi iye wakanyanya rudo. Ndiri kuita izvozvo nokuti ndakanga kunyadziswa chiso changu aine urema, ndinokuda zvikuru ". Sofi uye pakupedzisira akaenda vanogara July oga.